छोरीले कलेजो दान दिएपछि बाबुले पाए नयाँ जीवन
रमेश गिरी/भक्तपुर, २ साउन । बाबुआमाको कलेजोको टुक्रा हुन् छोराछोरी, छोराछोरीको कलेजोका टुक्रा हुन् बाबुआमा भन्ने भनाइलाई काठमाडौँ महानगरपालिका–१२, लगनटोलकी २४ वर्षीया सरिता महर्जनले चरितार्थ पारेकी छन् ।
आज मानव अङ्ग प्रत्यारोपण केन्द्र, भक्तपुरले आइतबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा गत असार १८ गते आफ्नै कलेजो दिएर ५७ वर्षीय बाबु हीराकाजी महर्जनलाई बचाउने साँहिली छोरी सरिताले बाबुआमा पनि कलेजाका टुक्रा हुन् भन्ने भनाइलाई चरितार्थ पारेकी हुन् ।
आफ्नै कलेजो दिएर बाबु हीराकाजी महर्जनलाई मृत्युको मुखबाट बचाएकी छोरी सरिता महर्जन बाबुका साथमा । गत असार १८ मा उनले मानव अङ्ग प्रत्यारोपण केन्द्र भक्तपुरमा कलेजो प्रत्यापरोपण गरेका थिए । नेपालमा यो दोस्रो कलेजो प्रत्यारोपण हो । तस्बिर : रमेश गिरी/ रासस
वि.सं. २०७२ वैशाखको महाभूकम्पले घर चर्कायो, त्रास बढायो, त्यसपछि मदिरा पिउने बानी लागेकै कारण कलेजो खराब भएको बताउँदै उनी भन्छन्, ‘भूकम्पको डरले पिउने बानी लगायो, त्यसैले कलेजो सिध्यायो, अब कसैलाई रक्सी नखाने सल्लाह दिन्छु म ।’
छोरी सरिताले भनिन्, ‘बुबालाई बचाउने ठूलो इच्छा थियो, भारतमा साढे एक करोड लाग्ने भनिएपछि आशा मारेपनि यहाँ करिब २० लाखमा कलेजो प्रत्यारोपण गर्न सकिने कुरा भएपछि बुबालाई बचाउन मैले आफैं कलेजो दिने निर्णय गरेँ ।’
कलेजो प्रत्यारोपणमा संलग्न डा. दीपेश गुरुवाचार्य सरिताको मानसिक शक्ति र परिवारप्रतिको मायाका कारण हीराकाजीले दोस्रो जीवन पाएको बताउँछन् ।
केन्द्रका निर्देशक डा पुकारचन्द्र श्रेष्ठ नेपाल मै पहिलो पटक गत मङ्सिर २२ गते शुरु भएको कलेजो प्रत्यारोपण अहिले दोस्रो पटक सफल भएको बताउँछन् । कलेजो प्रत्यारोपणका लागि विदेशमा एक करोडदेखि एक करोड ५० लाख रुपैयाँसम्म लाग्ने भए पनि नेपालमा भने केन्द्रले २० लाख देखि २५ लाख रुपैयाँमा कलेजो प्रत्यारोपण गर्न सफल भएको उनी बताउँछन् ।